लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेसु हटाउने निर्णय भएको छैन - Gandaki Sandesh
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेसु हटाउने निर्णय भएको छैन
बुटवल : रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट (मेसु) हटाउने निर्णय नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
‘मेसु हटाउने निर्णय भएको छैन, मुख्य सचिव ज्यूबाट योबारेको निर्णय माइन्युट भएकै छैन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता डा. खगेन्द्र सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मिडियामा कसरी समाचार आयो हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौं ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मेसु परिवर्तनको पत्र नआएको स्वीकारे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा पनि मेसु हटाइएको निर्णय अद्यावधिक भएको छैन ।
पूर्ववर्ती सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने खनाललाई मेसुबाट हटाएर रेडियोलोजी विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको दोहोर्याए ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दा यो कुरा ‘गोप्य’ राखिएको थियो । तर पत्रकारको प्रश्नमा तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता चौधरीले डा. खनाललाई हटाउने निर्णय भएको बताएका थिए ।
अध्यादेश मार्फत आयो लुम्बिनीको बजेट
बुटवल: प्रदेश सभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको... Read More